Zvikonzero nei tichida ndangariro foam kana chitubu chematuru | Rayson
Zvikonzero nei tichida ndangariro foam kana chitubu chematuru
Ini ndiri kushandisa 2n2222 pnjunction transisters kubva padio shack. Batanidza thruino \_ Anopikisa anoda kuwedzerwa pakati pePIN Line uye iyo Transistor Center PIN (ona mufananidzo). Pini muunganidzi (pini huru) kune ivhu. Batanidza iyo yakanaka kutungamirwa kwe waya inotungamirwa kune iyo 5 v yesimba remagetsi.
Pamusoro pekutarisira ganda remafuta, uchishandisa iyo chaiyo cosmetics uye yekudya ine hutano, munhu anofanira kusangana nachiremba kuti tikurukure mhinduro dzekubvisa acne. Iwe unogona kushandisa mimwe mishonga yemuromo senge vhitamini chiitiko chinobva. Kune makiromita emunharaunda aine makemikari akafanana seanodzora kukura kweAcne. Shandisa ACNE CREAKE Tora chiito pane iyi nyaya uye kuparadza iyo inokonzera iyo uye ita yako acne -
Ipapo iwe unoda kutora waya iyo isu tinopfuura nepakati pechimiro chemwenje uye iyo isu tinongoenda kuburikidza nebhodhoro uye takabatana pamwechete. Iwe uchave uine yakawanda yekunyepa waya mushure mekunge iwe uvete pamwechete. Kugadzirisa dambudziko iri, ingo dhonza waya kubva kune rumwe rutivi rwemwenje (